Mateo 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
7 “Munnyae atɛn+ a mubu nkurɔfo no na wɔammu mo atɛn; 2 atɛn a mubu no, ɛno ara na wobebu mo;+ susukora a mode susuw ma nkurɔfo no, wɔde besusuw ama mo.+ 3 Ɛnde, dɛn nti na wohwɛ ntɛtɛwa a ɛda wo nua aniwa so, na wunhu mpuran a ɛda w’ankasa aniwa so?+ 4 Anaasɛ wobɛyɛ dɛn atumi aka akyerɛ wo nua sɛ, ‘Ma minyi ntɛtɛwa no mfi w’aniwa so’; bere a, hwɛ! mpuran da w’ankasa aniwa so?+ 5 Nyaatwomni! Di kan yi w’ankasa aniwa so mpuran no, na wubehu sɛnea wubeyi ntɛtɛwa no afi wo nua aniwa so. 6 “Mommfa akronkronne mmma akraman,+ na monntow mo nhene nngu mprako anim, na wɔantiatia so+ annan wɔn ho ammɛtetew mo mu. 7 “Monkɔ so mmisa,+ na wɔde bɛma mo; monkɔ so nhwehwɛ, na mubehu; monkɔ so mmom,+ na wobebue mo. 8 Efisɛ obiara a obebisa no nsa bɛka,+ na obiara a ɔbɛhwehwɛ no behu, na obiara a obebom no wobebue no. 9 Mo mu hena koraa na ne ba+ bisa no paanoo a ɔde ɔbo bɛma no? 10 Anaasɛ obisa no apataa a, ɔde ɔwɔ bɛma no? 11 Enti sɛ mo a moyɛ abɔnefo+ mpo nim sɛnea moma mo mma akyɛde pa a, hwɛ mpɛn dodow ara a mo Agya a ɔwɔ soro no de nnepa+ bɛma wɔn a wobisa no no! 12 “Enti biribiara a mopɛ sɛ nnipa nyɛ mma mo no,+ mo nso monyɛ wɔn saa ara; nokwarem no, saa na Mmara ne Adiyifo no kyerɛ.+ 13 “Momfa ɔpon teateaa no mu;+ efisɛ ɔkwan a ɛsõ na ɛtrɛw no kɔ ɔsɛe mu, na nnipa bebree na wɔnam so rekɔ mu; 14 nanso ɔpon teateaa ne ɔkwan hihiaa no ne nea ɛkɔ nkwa mu, na nnipa kakraa bi na wohu.+ 15 “Monhwɛ yiye atoro adiyifo ho,+ na wɔhyehyɛ nguan nhoma ba mo nkyɛn,+ nanso wɔn mu de wɔyɛ mpataku adifudepɛfo.+ 16 Wɔn aba na mode behu wɔn.+ Wɔtetew bobe wɔ nsɔe so, anaasɛ wɔtetew borɔdɔma wɔ ohwirom so?+ 17 Saa nso na dua pa biara sow aba pa, na dua bɔne biara sow aba bɔne;+ 18 dua pa ntumi nsow aba bɔne, na dua bɔne ntumi nsow aba pa. 19 Dua biara a ɛnsow aba pa no, wotwa na wɔde gu ogya mu.+ 20 Ne saa nti, wɔn aba na mode behu wɔn.+ 21 “Ɛnyɛ obiara a ose me sɛ, ‘Awurade, Awurade’ no na ɔbɛhyɛn ɔsoro ahenni no mu, na mmom nea ɔyɛ+ m’Agya a ɔwɔ soro no apɛde no na ɔbɛhyɛn mu.+ 22 Ɛda no, nnipa bebree bɛka akyerɛ me sɛ, ‘Awurade, Awurade,+ yɛanhyɛ nkɔm wo din mu, na yɛantu adaemone wo din mu, na yɛanyɛ ahoɔdenne bebree wo din mu anaa?’+ 23 Ɛnna afei mɛpae mu aka akyerɛ wɔn sɛ: Minnim mo da!+ Mumfi me so nkɔ, mo a moyɛ mmaratode.+ 24 “Enti obiara a ɔte me nsɛm yi na ɔyɛ no, wɔde no bɛtoto ɔbadwemma bi a osii ne fie sii ɔbotan so ho.+ 25 Na osu tɔe na eyirii, na mframa bɔe bɛbɔɔ fie no, nanso ammu, efisɛ na wato asi ɔbotan so. 26 Afei, obiara a ɔte me nsɛm yi na ɔnyɛ+ no, wɔde no bɛtoto ɔkwasea+ bi a osii ne fie sii anhwea so ho. 27 Na osu tɔe na eyirii, na mframa bɔe bɛbɔɔ fie+ no ma edwiriw gui, na ebubui pasaa.+” 28 Afei bere a Yesu wiee nsɛm yi no, ɔkwan a ɔfaa so kyerɛkyerɛe no maa nnipakuw no ho dwiriw wɔn;+ 29 efisɛ na ɔrekyerɛkyerɛ wɔn te sɛ obi a ɔwɔ tumi,+ na ɛnte sɛ wɔn akyerɛwfo no.